ကဲ ကျွန်တေ်ာတို့ အရှေ့ကိုပဲ မျှော်နေလို့မဖြစ်သေးဘူး
ဟိုသီချင်းလိုပေ့ါ.. "အရှေ့ကိုလျှောက်ပါလို့.... အနောက်
ကိုတဲ့မျှော်လိုက်ရင် မျှော်လိုက်ရင်" ဆိုတဲ့အတိုင်း လက်ရှိ
Window 7, window 8 တွေကိုပဲ သဲကြီးမဲကြီး Activate
လုပ်ဖို့ ပဲ လုပ်နေကြတယ် တစ်ချို့ XP ကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်
Window XP ကို SP-1, SP-2, SP-3 တွေအတွက်လည်း
ဖိုင်စိုက်ဒ်ကလည်း 1MB တောင်မပြည့်တော့ ဒေါင်းရတာအဆင်
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေထုံးစံအတိုင်းပေ့ါ ဟဲဟဲ
Crack Version တွေအများဆုံးသုံးကြတယ်။ပီးတော့
အော်တောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက် ၂၀၁၃ ရဲ့ နောက်
Avast Key for all
AVG Key for all
Avira Key for all
NOD32 Key for all
Kaspersky key for all
Malwarebytes Anti-malware key for all
3MB ရှိတယ် ဒီမှာယူမယ်
ကဲ ကျွန်တော်တို့ Activator တွေကိုတစ်ခုချင်းလိုက်ရှာနေရတာ
ပင်ပန်းတယ် အကုန်လုံးကိုတစ်ခုတည်းနဲ့ ရတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဆို
လည်း 1MB ပဲရှိပီးတော့ သူ့ Activation လုပ်နိုင်တာတွေကတော့
စတာတွေကိုပါ အလွယ်တကူ Activation လုပ်နိုင်ပါတယ်။စိတ်ဝင်
ကျွန်တေ်ာအရင်က Internet Connection Speed ကိုမြှင့်တဲ့
Software တွေကိုမယုံကြည်ပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်ကတော့
သူ့အိုးနှင့်သူ့ဆန် တန်ရုံပဲရမယ်ဆိုတဲ့ စကားပုံကြောင့်လေ
အခုတော့ ဒီ Software လေးကိုသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့
တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ 4MB လိုင်းကို
၄င်း Software လေးသွင်းပီး 3MB Size ရှိတဲ့ ဖိုင်လေးကို
စမ်းပီး Upload လုပ်ကြည့်တာ မယုံကြည်နိုင်အောင် ၃စက္ကန့်
လောက်နဲ့ Uploaded ဖြစ်သွားတယ်။ ထပ်ပီးမယုံလို့
20 MB Size ကို Upload ထပ်လုပ်ကြည့်တာ ၁မိနစ်တောင်
မကြာဘူးတက်သွားတယ် Download လည်း IDM နဲ့တွဲပီး
600MB လောက်ကို ဒေါင်းကြည့်တာ မထင်မှတ်လောက်
အောင် မြန်ဆန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကဲညွှန်းတာတွေ
တော့ ဒီမှာဒေါင်းပါ Software အသွင်းပြုပုံကိုတော့ Folder
ထဲမှာ ကျွန်တော် Notepad လေးနဲ့ ရေးပေးထားပါတယ်
Chrome Browser ထဲက Save လုပ်ထားတဲ့ Password တွေကိုကြည့်မယ်
ကျွန်တော့ ဘလော့လေးထဲမှာ Firefox Password Stealer,
Facebook Password Depcryptor စသဖြင့် တင်ထားပီးပါ
ပီ ယခုတစ်ခါပြောပြမှာလေးကတော့ Chrome Borwser မှာ
Save လုပ်ထားတဲ့ Password တွေကို Third Party Utilities
Software သုံးပီးကြည့်တဲ့နည်းနဲ့ Manual ကြည့်တဲ့နည်းဖြစ်
ပါတယ်။ အရင်ဆုံး Manual ကြည့်တဲ့နည်းကိုပြောပြပေးပါ့
မယ်။ အရင်ဆုံး ထုံးစံအတိုင်းပေ့ါ Google Chrome Browser
Settings မှတင့်သွားပီး မျှားအနီပြထာတဲံနေရာလေးမှာ
မိမိက Browser မှာသိမ်းထားသမျှ Password တွေကိုဖော်ပြပေး
မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Maunal ကြည့်တဲ့နည်းလေးပါ။ ကျွန်တော်
တို့က Utilities ကိုသုံးပီးကြည့်ဖို့အတွက်ကျတော့ လိုအပ်တဲ့ Software
လေးကိုတော့ ဒီမှာဒေါင်းမယ် ပီးသွား၇င်တော့ ကျွန်တော်တို့ Install
လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။ထို့နောက် Program ကိုဖွင့်ပီးအောက်ဖော်ပြပါပုံ
မှ Start Recovery ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ မိမိသိမ်းထား မှတ်ထားသမျှ
ID & Password များကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေ
မယ်လို့ယူဆပါတယ် မရှင်းလင်းချက်များရှိပါက Comment Box
သို့မဟုတ် ကျွန်တော့် FB/CZarni.86 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
ကဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က သင့်ကွန်ပျူတာ ၀င်းဒိုး ၇မှာ
ပုံမှန်တက်နေကျ ဖြစ်တဲ့ Default Login Screen ကိုမသုံး
ချင်လို့ သင့်စိတ်ကြိုက် Login Screen မှာ နောက်ခံပုံလေး
တွေထည့်ဖို့နည်းဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့ Software လေးကို
တော့ ဒီမှာဒေါင်းမယ် ပီးသွားရင်
ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး Window7Login Changer ကို
မ Run ခင်မှာ သင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားတဲ့ Foler ထဲမှ
enable background change.cmd ဆိုတဲ့ CLI Program
လေးကိုအရင် Run ပါ။ ဒါမှ သင်ချိန်းလိုတဲ့ Background ကို
Support လို့ဖို့အတွက် Registry File ထဲမှာနဲ့ System32
ထဲမှာ လိုအပ်တာတွေကို အလိုအလျှောက်လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ
Win7LogonBackgroundChanger_Click.exe ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို Double
ဒါဆိုရင် သင်ပြောင်းချင်တဲ့ပုံကို စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး မိမိအသုံးပြုချင်တဲ့ Image File ကို Desktop မှာအရင်
Chooseafolder ကိုအရင်နှိပ်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် Sub menu ပေါ်လာ
ပါလိမ့်မယ် ဒီအထဲမှာ Desktop ကိုရွေးပေးပီး OK နှိပ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် အထက်ပါပုံအတိုင်း မိမိသွင်းချင်တဲ့ပုံကို Select တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါ
ထို့နောက် Apply ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါအောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း
သင့်ကွန်ပျူတာရဲ့ Log in Screen မှာ သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ပုံပေါ်လာဖို့အတွက်
Setting Apply လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ပီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကီးဘုတ်ကနေ WindowKey+L ကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်
လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံက Log in Screen မှာပေါ်နေ
မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အခုပြောမှာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အများသုံးဖြစ်တဲ့ Zawgyi Font
ကို Back Track5OS မှာ ထည့်သွင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လည်း
ဆိုတော့ တစ်ခါတစ်လေ BT ကို ကျွန်တော်တို့ မသုံးမဖြစ်သုံးရတဲ့
အခါမျိုးတွေမှာ Micorsoft Platform ကို Zawgyi Font သုံးဖို့အတွက်
ပြန်သွားစရာမလိုပဲ BT မှာတင် Browser တွေမှာ မြန်မာလိုမြင်နိုင်
၇ိုက်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ပုံအသေးစိတ်
ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးအား ကူညီပေးသော ကျွန်တော့ညီလေး AC Vs DC အားကျေးဇူးတင်လျှက်.......
မြန်မာလက်ကွက်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် Software ကောင်းလေးပါ
ကောင်းတာလေးတွေချည်းပဲ သီးသန့် တစ်စုတစ်စည်းတည်း
တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒီကေင်လေးကိုစိတ်
Blue Screen Error မြင်တိုင်း Memory Dump ပါလို့ပြောနေတဲ့သူတွေအတွက်
Complete List of BSOD Errors Codes
We have listed more than 250 error codes which you might ever come across while using any Windows Operating system including Windows 7, Vista and Windows XP.
1) STOP Error 0×00000001: APC_INDEX_MISMATCH
2) STOP Error 0×00000002: DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY
3) STOP Error 0×00000003: INVALID_AFFINITY_SET
4) STOP Error 0×00000004: INVALID_DATA_ACCESS_TRAP
5) STOP Error 0×00000005: INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT
6) STOP Error 0×00000006: INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT
7) STOP Error 0×00000007: INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT
8) STOP Error 0×00000008: IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL
9) STOP Error 0×00000009: IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL
16) STOP Error 0×00000010: SPIN_LOCK_NOT_OWNED
17) STOP Error 0×00000011: THREAD_NOT_MUTEX_OWNER
18) STOP Error 0×00000012: TRAP_CAUSE_UNKNOWN
19) STOP Error 0×00000013: EMPTY_THREAD_REAPER_LIST
20) STOP Error 0×00000014: CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED
21) STOP Error 0×00000015: LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE
22) STOP Error 0×00000016: CID_HANDLE_CREATION
23) STOP Error 0×00000017: CID_HANDLE_DELETION
24) STOP Error 0×00000018: REFERENCE_BY_POINTER
25) STOP Error 0×00000019: BAD_POOL_HEADER
32) STOP Error 0×00000020: KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
33) STOP Error 0×00000021: QUOTA_UNDERFLOW
34) STOP Error 0×00000022: FILE_SYSTEM
35) STOP Error 0×00000023: FAT_FILE_SYSTEM
36) STOP Error 0×00000024: NTFS_FILE_SYSTEM
37) STOP Error 0×00000025: NPFS_FILE_SYSTEM
38) STOP Error 0×00000026: CDFS_FILE_SYSTEM
39) STOP Error 0×00000027: RDR_FILE_SYSTEM
40) STOP Error 0×00000028: CORRUPT_ACCESS_TOKEN
41) STOP Error 0×00000029: SECURITY_SYSTEM
48) STOP Error 0×00000030: SET_OF_INVALID_CONTEXT
49) STOP Error 0×00000031: PHASE0_INITIALIZATION_FAILED
50) STOP Error 0×00000032: PHASE1_INITIALIZATION_FAILED
51) STOP Error 0×00000033: UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL
52) STOP Error 0×00000034: CACHE_MANAGER
53) STOP Error 0×00000035: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
54) STOP Error 0×00000036: DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
55) STOP Error 0×00000037: FLOPPY_INTERNAL_ERROR
56) STOP Error 0×00000038: SERIAL_DRIVER_INTERNAL
57) STOP Error 0×00000039: SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX
64) STOP Error 0×00000040: TARGET_MDL_TOO_SMALL
65) STOP Error 0×00000041: MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
66) STOP Error 0×00000042: ATDISK_DRIVER_INTERNAL
67) STOP Error 0×00000043: NO_SUCH_PARTITION
68) STOP Error 0×00000044: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
69) STOP Error 0×00000045: INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS
70) STOP Error 0×00000046: DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
71) STOP Error 0×00000047: REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
72) STOP Error 0×00000048: CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
73) STOP Error 0×00000049: PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF
80) STOP Error 0×00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
81) STOP Error 0×00000051: REGISTRY_ERROR
82) STOP Error 0×00000052: MAILSLOT_FILE_SYSTEM
83) STOP Error 0×00000053: NO_BOOT_DEVICE
84) STOP Error 0×00000054: LM_SERVER_INTERNAL_ERROR
85) STOP Error 0×00000055: DATA_COHERENCY_EXCEPTION
86) STOP Error 0×00000056: INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION
87) STOP Error 0×00000057: XNS_INTERNAL_ERROR
88) STOP Error 0×00000058: FTDISK_INTERNAL_ERROR
89) STOP Error 0×00000059: PINBALL_FILE_SYSTEM
96) STOP Error 0×00000060: PROCESS_INITIALIZATION_FAILED
97) STOP Error 0×00000061: HAL1_INITIALIZATION_FAILED
98) STOP Error 0×00000062: OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED
99) STOP Error 0×00000063: SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED
100) STOP Error 0×00000064: SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED
101) STOP Error 0×00000065: MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED
102) STOP Error 0×00000066: CACHE_INITIALIZATION_FAILED
103) STOP Error 0×00000067: CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
104) STOP Error 0×00000068: FILE_INITIALIZATION_FAILED
105) STOP Error 0×00000069: IO1_INITIALIZATION_FAILED
112) STOP Error 0×00000070: SESSION4_INITIALIZATION_FAILED
113) STOP Error 0×00000071: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
114) STOP Error 0×00000072: ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED
115) STOP Error 0×00000073: CONFIG_LIST_FAILED
116) STOP Error 0×00000074: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
117) STOP Error 0×00000075: CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
118) STOP Error 0×00000076: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
119) STOP Error 0×00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
120) STOP Error 0×00000078: PHASE0_EXCEPTION
121) STOP Error 0×00000079: MISMATCHED_HAL
128) STOP Error 0×00000080: NMI_HARDWARE_FAILURE
129) STOP Error 0×00000081: SPIN_LOCK_INIT_FAILURE
130) STOP Error 0×00000082: DFS_FILE_SYSTEM
131) STOP Error 0×00000085: SETUP_FAILURE
135) STOP Error 0×00000090: PP1_INITIALIZATION_FAILED
136) STOP Error 0×00000092: UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM
137) STOP Error 0×00000093: INVALID_KERNEL_HANDLE
138) STOP Error 0×00000094: KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT
139) STOP Error 0×00000096: INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
140) STOP Error 0×00000097: BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED
141) STOP Error 0×00000098: END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD
142) STOP Error 0×00000099: INVALID_REGION_OR_SEGMENT
222) STOP Error 0×00000100: LOADER_BLOCK_MISMATCH
223) STOP Error 0×00000101: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
224) STOP Error 0×00000103: MUP_FILE_SYSTEM
225) STOP Error 0×00000104: AGP_INVALID_ACCESS
226) STOP Error 0×00000105: AGP_GART_CORRUPTION
227) STOP Error 0×00000106: AGP_ILLEGALLY_REPROGRAMMED
228) STOP Error 0×00000108: THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE
229) STOP Error 0×00000109: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
235) STOP Error 0×00000111: RECURSIVE_NMI
236) STOP Error 0×00000112: MSRPC_STATE_VIOLATION
237) STOP Error 0×00000113: VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
238) STOP Error 0×00000114: VIDEO_SHADOW_DRIVER_FATAL_ERROR
239) STOP Error 0×00000115: AGP_INTERNAL
240) STOP Error 0×00000116: VIDEO_TDR_ERROR
241) STOP Error 0×00000117: VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
242) STOP Error 0×00000119: VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
247) STOP Error 0×00000121: DRIVER_VIOLATION
248) STOP Error 0×00000122: WHEA_INTERNAL_ERROR
249) STOP Error 0×00000124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
250) STOP Error 0×00000127: PAGE_NOT_ZERO
If you are unable to find your BSOD error message in this list, do let us know with proper screenshot. We will add it up this list so that others may be benefitted from it.